सत्ता कब्जाका १३ दिन : अफगानिस्तानमा कुन–कुन समूह सक्रिय छन् ? - समाजवादी पोस्ट::samajwadipost.com
तालिबानी लडाकुहरुले काबुल कब्जा गरेको १३ दिन भयो । तर यस अवधिमा सिंगो अफगानिस्तान उनीहरुको कब्जामा भने छैन । यहाँ तालिवान विरोधी शक्तिहरु पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । त्यस्तै, अन्य धेरै आतंकवादी शक्तिहरु पनि शक्ति प्रदर्शनमा लागेका छन् । यसैको उदाहरण हो –बिहीबार काबुल विमानस्थलमा भएको आतंककारी हमला । यस बिस्फोटमा मर्नेको संख्या १ सय नाघिसकेको छ, आईएसआईएस–केले यो विस्फोटको जिम्मेवारी लिइसकेको छ ।
यो समूहले अफगानिस्तान कब्जा गरेको घोषणा गर्दै विजय उत्सव मनाइसकेको छ । उसले आगामी मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने आफ्ना नेताहरुको नाम पनि घोषणा गरिसकेको छ । तालिवानका झन्डै ८० हजार लडाकुहरुले २ लाखभन्दा धेरै संख्यामा रहेका अफगानी सेनालाई हराएर काबुल कब्जा गरेका हुन् । सन् १९९६ मा पनि उसले काबुल कब्जा गरेको थियो र त्यसको पाँच वर्षसम्म अफगानिस्तानमा शासन ग¥यो । २००१ मा अमेरिकी र नेटो सैनिकको हमलापछि तालिबानी सत्ता ढलेको थियो । त्यसपछि तितरवितर भएका लडाकुहरु फेरि जुटेर, नयाँ सदस्यहरु थप्दै तालिवानले काबुल कब्जा गरेको हो ।
अलकायदा कहाँ छ ?
पछिल्ला वर्ष तालिबानले अलकायदासँगको सम्बन्धलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राखेको छ, अलकायदा र अन्य आतंककारी समूहलाई अफगानी भूमी प्रयोग गर्न नदिने वाचा उसले २०२० मा गरेको थियो । तर, तालिबानले विभिन्न शहर र त्यहाँका जेल कब्जा गरेपछि जेलमा रहेका लडाकुहरुलाई रिहा गरेको थियो । यसक्रममा अलकायदाप्रति तालिबानी लडाकुले सद्भावन राख्दा अलकायदाका धेरै लडाकुहरु रिहा भएको विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुले अब फेरि एकजुट भएर नयाँ दस्ता बनाउनसक्ने विज्ञहरुको आँकलन छ ।
आईएसआईएस–के खुरासन आतंकवादी समूह आईएसआईएस अर्थात् (ईस्लामिक स्टेट इन इराक एन्ड सिरिया) को शाखा संगठन हो । यसले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा रहेका जिहादीहरुलाई एकजुट गर्छ । बिहीबार काबुलस्थित हमिद कारजाई विमानस्थलमा यही समूहले बिस्फोट गराएको हो । २०१६ यता उसले काबुलमा पटक–पटक हमला गरिसकेको छ । यो संगठनले तालिबानलाई अमेरिकी कठपुतलीहरुको समूह मान्छ ।
२० वर्षअघि जतिबेला काबुलमा तालिबानको सत्ता थियो, त्यतिबेला पनि उज्वेक र ताजाक दस्ताहरुको गठबन्धन नर्थन एलाईन्सले पन्जशीर उपत्यकामा उसलाई पस्न दिएको थिएन । र, अहिले फेरि तालिबानले पुरै देश कब्जा गरिसक्दा पनि यहाँ आफ्नो उपस्थिती देखाउन सकेको छैन । अर्थात्, काबुलबाट केवल १ सय ५० किलोमिटर टाढाको यस उपत्यकामा तालिबानले कहिल्यै कब्जा जमाएको इतिहास छैन । सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकामा हमला गर्नुभन्दा केहीअघि अलकायदाका लडाकुहरुले अफगानिस्तानमा नर्थन एलाइन्सका मुख्य नेता अहमद शाह मसुदको हत्या गरेका थिए ।
अहिले नेशनल फ्रन्ट अफ अफगानिस्तान नामक यस दस्तालाई मसुदका छोरा अहमद मसुदले हाँकिरहेका छन् । उनीहरु तालिबानविरुद्ध संघर्षरत छन् । तालिबानलाई पन्जशीरमा नछिर्न पनि उनीहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् । यो गठबन्धनलाई तालिबानविरोधी अन्य गठबन्धनहरुको पनि सहयोग छ ।
अमेरिकाका सहयोगीहरु कहाँ छन् ?
उनीहरु हिँडिसके । अफगानिस्तानका अपदस्थ राष्ट्रपति असरफ गनी विदेश भागिसकेका छन् । उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह पन्जशिर उपत्यकामा छन् । राष्ट्रपतिले देश छाडेर हिँडेकाले आफुले उक्त जिम्मेवारी पाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै उनले यस विषयमा आफु छलफलमा रहेको धारणा केहीअघि राखेका थिए । अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपतिहरू तथा धेरै नेताहरु अहिले घरमै नजरबन्दमा छन् ।